သတင်း - RFID ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ အားသာချက်များကား အဘယ်နည်း။
ဆီလီကွန် Rfid လက်ပတ်/လက်ကောက်
ယက်/ထည် Rfid လက်ပတ်
စက္ကူ Rfid လက်ပတ် / လက်ကောက်
PVC Rfid လက်ပတ်/လက်ကောက်
RFID ဆန့် Elastic လက်ပတ်/လက်ကောက်
နိုင်လွန် Rfid လက်ပတ်
ပလပ်စတစ် Rfid လက်ပတ်
LED Rfid လက်ပတ်
အခြား Rfid လက်ပတ်
13.56MHZ RFID ကတ်
860mhz~960mhz UHF ကတ်
Dual Chip RFID ကတ်
Chip Card ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Smart Card အင်းလေး
RFID လေကာမှန် tag/စတစ်ကာ
RFID စာကြည့်တိုက် Tag
RFID Nail Tag ၊
Rfid လက်ဝတ်ရတနာ Tag
သိမ်းသွင်းထားသော တိရစ္ဆာန် Tag
RFID သော့ချိတ်/RFID သော့တံ
Metal NFC Tag တွင်
NFC တိုကင်/အကြွေစေ့ တဂ်
NFC Epoxy တံဆိပ်များ
မိုဘိုင်း NFC စာဖတ်သူ စာရေးဆရာ
စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ခြင်း ပလပ်စတစ် PVC ကတ်များ
PVC သော့ fob/Snap-off key Tag
RFID ပိတ်ဆို့ခြင်း ထုတ်ကုန်များ
ID Card ပရင်တာ
ID Card ကိုင်ဆောင်ထားသူ
အပူချိန် ခန္ဓာကိုယ် မျက်နှာကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း။
သို့သော်လည်း ဂိုဒေါင်လင့်ခ်ရှိ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားပြီး ထိရောက်မှုနည်းသည့် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ပြင်ပကုမ္ပဏီ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဂိုဒေါင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ စက်ရုံပိုင်ဂိုဒေါင်ကုမ္ပဏီများနှင့် အခြားဂိုဒေါင်အသုံးပြုသူများ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှတစ်ဆင့် ရိုးရာကုန်လှောင်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အောက်ပါပြဿနာများရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
1. ကုန်ပစ္စည်းများကို ဂိုဒေါင်ထဲသို့ သွင်းပါတော့မည် ၊ ဂိုဒေါင်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းကို မပို့ရသေးသောကြောင့် ချက်ခြင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
2. ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်သည် အချိန်အတော်ကြာ ဝေးကွာနေခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ဂိုဒေါင်ထဲတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ မပါရှိသေးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
3. ကုန်ပစ္စည်းများကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသော်လည်း သိုလှောင်မှုတည်နေရာကို မှတ်တမ်းတင်ရန် မေ့လျော့သွားခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းသည့်နေရာမှားယွင်းစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေရန် နောက်ထပ်ရက်တစ်ဝက်ကြာပါသည်။
4. ဂိုဒေါင်မှ ထွက်ခွာသည့်အခါ ဝန်ထမ်းများသည် ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူရန် ဂိုဒေါင်အများအပြားတွင် အလှည့်ကျ လည်ပတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မော်တော် ယာဉ်များအတွက် စောင့်ဆိုင်းချိန် ကြာမြင့်ပါသည်။
5. ပန်းကန်ပြားသည် ရက်အနည်းငယ်သာ ရှိသေးသောကြောင့် ထိရောက်မှု နည်းပါးပြီး ထိရောက်မှုလည်း နည်းပါးပြီး မကြာခဏ အမှားအယွင်းများ ရှိနေပါသည်။
6. များပြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအနာဂတ်ထုတ်ကုန်များ၏စာရင်းကိုယူသည့်အခါတိုင်းတွင်ရေတွက်နိုင်ပြီး၊ ပထမဝင်၊ ပထမထွက်သည်အလွတ်စကားပြောဖြစ်လာသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဂိုဒေါင်ပြဿနာများ တည်ရှိနေခြင်းသည် လုပ်ငန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုအပေါ် ဆိုးရွားစွာ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီး ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ကို အရေးပေါ်ဖြေရှင်းရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ RFID ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုအဆင်ပြေ၊ ထိရောက်ပြီး အသိဉာဏ်ရှိသော ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုမုဒ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ဒီတော့ အထက်ဖော်ပြပါ ဂိုဒေါင်ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ RFID ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် RFID အီလက်ထရွန်းနစ် tags ကုန်လှောင်ရုံရှိ ကွက်လပ်တစ်ခုစီနှင့် သိုလှောင်မှုတည်နေရာအတွက်၊ အထူးစက်ကိရိယာအမျိုးမျိုးဖြင့်၊ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူအား ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းစီမံခန့်ခွဲရန် များစွာလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် pallet နှင့် ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုအချက်အလက်ကို အလိုအလျောက်ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် UHF မှတဆင့် သိမ်းသွင်း တံဆိပ် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၎င်းသည် အသုတ်၊ မော်ဒယ်၊ ကုန်ပစ္စည်းအမည်၊ သိုလှောင်ချိန်၊ ပေးသွင်းသူ၊ အခြေအနေစသည်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို တိကျစွာ ပိုင်းခြားနိုင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည် ခေတ်မီစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ပိုမိုကိုက်ညီပါသည်။
နေ့စဥ်လက်ခံသည့်အလုပ်များကို RFID လက်ကိုင်ကိရိယာသို့ အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုနိုင်ပြီး စာရွက်ဖြတ်ပိုင်းများမပါဘဲ အလုပ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင်သိနိုင်သည်။
ပြေစာဒေတာကို ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ ပြေစာဒေတာ တိကျသေချာစေရန် စနစ်သည် အလိုအလျောက် စုဆောင်းပြီး ရေတွက်ပါသည်။
ဂိုဒေါင်ထဲသို့ ကုန်ပစ္စည်းများရောက်ရှိပြီးနောက်၊ စနစ်သည် ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ စာရင်းပမာဏကို အလိုအလျောက် အပ်ဒိတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး စာရွက်စာတမ်းများလည်း ပြီးမြောက်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးနောက် RFID ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် RFID forklift နှင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး၊ စင်တင်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် RFID forklift သို့ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
RFID forklift သည် pallet ကိုအလိုအလျောက်စကင်န်ဖတ်ပြီး၊ pallet ၏ကုန်တင်အချက်အလက်နှင့် warehouse အချက်အလက်ကိုပြသပေးသည်၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရာနေရာကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြကာ စင်ပေါ်ရှိစာရင်းကိုတိုးစေသည်။
စနစ်သည် ကောက်နေသော လမ်းလျှောက်လမ်းကို အလိုအလျောက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ အသွားအပြန် လမ်းလျှောက်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ကုန်ပစ္စည်းများ ကောက်ယူခြင်း အပြီးသတ်ရန် တစ်ကြိမ်သာ လမ်းလျှောက်ရုံသာ ဖြစ်သည်။
RFID forklifts များသည် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အချက်အလက်များကို လျင်မြန်စွာစစ်ဆေးရန် RFID pallet တက်ဂ်များကို စကင်န်ဖတ်ကာ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း လည်ပတ်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ပထမဦးစွာ ပထမအကြိမ် စိစစ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ထွက်ခွာမှုပြီးစီးပြီးနောက်၊ ပြင်ပစာရင်းကို အလိုအလျောက် လျှော့ချသည်။
စာရွက်စာရင်းပြေစာများ မလိုအပ်ဘဲ၊ RFID မိုဘိုင်းလ်အလုပ်ပလပ်ဖောင်းသည် စနစ်ပြေစာများကို အွန်လိုင်းတွင် ကြိုးမဲ့စစ်ဆေးနိုင်သည်။
စာရင်းအချက်အလက်အချက်အလက်ကို ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ စနစ်သည် ဆိုက်တွင်းလည်ပတ်မှုမှတ်တမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
စာရင်းအင်းတိကျမှုသည် တည်နေရာအဆင့်နှင့် ကွက်လပ်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိသွားသောကြောင့် စာရင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ဂိုဒေါင်ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် လုပ်ငန်းအတွင်းနှင့် အပြင်သို့ ပံ့ပိုးကူညီပါ။
RFID forklifts များအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် သိုလှောင်မှုအမြန်နှုန်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်လာပြီး သိုလှောင်မှုကွာခြားချက်ဒေတာကို အလိုအလျောက် အကျဉ်းချုပ်ပေးပါသည်။
RFID ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ အသုံးချမှုသည် ဂိုဒေါင်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို များစွာရိုးရှင်းစေပြီး ဒေတာများကို အလိုအလျောက်စုဆောင်းပြီး ပြုပြင်မွမ်းမံကာ လူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်မှုလိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးကာ ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်နှင့် ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းအတွက် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး အလိုအလျောက်ကုန်လှောင်ရုံစင်တာကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ .
စက်ရုံထပ်တိုး :5အဆင့် C အဆောက်အဦ Bao'guan Tech Park၊ Guanlan၊ Longhua ခရိုင်၊ ရှန်ကျန်း၊ တရုတ်။
စက်ရုံ Add : 6th Floor, Zhongxing 4th Road, Hetang Town, Pengjiang District, Jiangmen City, Guangdong Province, China.
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2020 : All Rights Reserved.